Runtii ma taqaanaa sida loo isticmaalo dashcam baabuur? Runtii ma taqaan sida loo doorto oo loo doorto?
Hadday tahay darawal duug ah, darawal cusub, rag rag ah, ama haweeney darawal ah, waxay ka baqayaan shilalka iyo shilalka. Waxaa jira kaliya rikoor wadista. Maanta Yingjia Farsamada elektaroonigga ah ayaa ku bari doonta sida loo iibsado rikoor wadista gawaarida.
1. Nooca tiyaatarka guriga: Astaamihiisu waa in dhalaalku yahay qiyaastii 2000 lumens (iyadoo la saadaalinayo soo saarista, tiradani way sii kordheysaa, isweydaarsiguna wuu ka sareeyaa), iyo saamiga dhinaca shaashadda saadaashu inta badan waa 16: 9. Dekeddo fiidiyoowyo kala duwan ah ayaa dhameystira......
Waxaa jira shaqooyin badan oo duubista xogta wadista ah: Ugu horreyntii, shilka waa mid dib loo soo ceshan karo. Rikoorka wadista wuxuu duubi karaa waqtiga wadista darawalka. Rikoodheyaasha qaarkood waxay leeyihiin shaqo xusuusin ah. Haddii aad daalan tahay, waxaad xusuusin kartaa milkiilaha inuu is......
Isbedelada taariikhiga ah ee hagida gawaarida
Caan ka noqoshada gawaarida gaarka loo leeyahay iyo kororka hababka socdaalka sida safarrada isdabamarinta, baarayayaasha gawaarida ayaa caan ku noqday milkiilayaasha gawaarida, waxayna xitaa noqdeen "hub" lagama maarmaan u ah dadka qaar inay safraan. Dad badan oo milkiileyaal baabuur ah waxay daree......